Egwuregwu Golf n'etiti ndị egwuregwu 4 na 8 na Oke Golf | Gam akporosis
Oke Golf bụ ọhụụ ọhụrụ na-eme n'ịntanetị nke ị ga - enwe ike ịlụ ọgụ na 4-to-3 duel megide ndị egwuregwu XNUMX ọzọ iji hụ onye na - enweta ọnụọgụ kacha nta iji mee oghere ahụ.
Ọ ga-abụ oghere 3 ga-ekpebi onye putara onye mmeri na onye mmeri na a nnọọ nlezianya golf egwuregwu ke visual akụkụ na-egbu ihe osise. Dị ka ọ dị n'ihe ọmụmụ physics ka anyị wee nwee mmetụta, ọbụnadị site n'echiche na-adịghị mma na nke arcade, na egwuregwu a.
1 Gaa maka ugo na Golf Oke
2 Soro ndị enyi, ndị ezinụlọ ma ọ bụ karịa gwuo egwu
3 Egwuregwu golf nke Spanish
Gaa maka ugo na Golf Oke
Oke Golf bụ egwuregwu golf ọhụrụ na na-eru nso n’ikpere mmiri nke ndị ọzọ ndị na-agba chaa chaa n'egwuregwu a. Ọbụna ndị nwere dọkpụrụ site na ịme anwansị ha enwebeghị ike ịbịaru nso ịdị mma nke egwuregwu a nke a na-ahụkarị nke ọma.
Ọdịdị dị elu dị elu, ubi n'otu akara ahụ na ihe ngosi na arụmọrụ na -emepụta nnukwu ahụmịhe egwuregwu. Na Oke Golf anyị raara onwe anyị nye igwu egwu megide ndị egwuregwu atọ ọzọ ga-enwe otu ebumnuche dị ka anyị, iti obere ọnụọgụ ole na ole iji mechaa oghere ahụ.
Ha bụ oghere atọ nke otu usoro nke ubi anyi ga-emeghe nke nta nke nta na nke nta nke nta. N'ezie anyị nwere ụzọ abụọ: otu kpochapụwo na otu oke. Ọ dị oke ebe anyị ga - eche egwuregwu 7 ihu, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ọnọdụ igwu egwu na ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ; dị ka usoro egwuregwu a Anyị adụla gị ọdụ izu ole na ole gara aga.
Soro ndị enyi, ndị ezinụlọ ma ọ bụ karịa gwuo egwu
Dị ka egwuregwu freemium dị mma warara akpọchi osisi, bọọlụ na ndị ọzọ iji gbaa anyị ume ịnọgide na-egwu ya. Jiri ike, yabụ ọ bụrụ na ị kpebie igwu egwu mgbe mgbe, ị ga-ahụ onwe gị megide enweghị ike ịme ya na-ejighị ego egwuregwu. Ọ bụ nkwarụ kasịnụ nke aha a nwere ihe ndị dị mma.
Bọọlụ ndị ahụ ahaziri iche, gịnịkwa ka ọ na-ekwu ihe banyere ugwo iji merie, na-eduga anyị ikwe ka ihe otiti ndị ahụ zie ezi ma nwekwaa ike ịchịkwa ha. Ka o sina dị, site na ntanetị kụrụ anyị nwere enyemaka nke nsụgharị égbè na ọbụna ike dị mkpa iji ruo ebe achọrọ.
Egwuregwu ndị ahụ bụ sitere na ozugbo ya mere ị ga - ahụ ndị egwuregwu ndị ọzọ ka ha na - akụ bọọlụ gọọlfụ ha ka ha bịaruo oghere ahụ nso. N'ezie, ịbụ onye e nyere onyinye nke ọma, igwu egwu na oghere ọhụrụ pụtara na anyị nwere ike ịnụ ụtọ gburugburu ebe dị iche iche dịka ọhịa cherry ma ọ bụ spa.
Egwuregwu golf nke Spanish
Oke Golf nke a na Spanish, yabụ na ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla ịghọta igwe na egwuregwu ahụ dum. A na-edepụtagharị menu na ngebichi site na egwuregwu ndị ọzọ dịka Supercell. Ya mere na mmetụta freemium dị n'oge niile nke mere na o doro anyị anya na iji kaadị ihe niile ga-adị mfe; ọ bụ ezie na anyị ekwesịghị ịdọrọ mgbasa ozi iji nweta ụfọdụ ihe.
N'anya ọ kariri ihe obi uto ma were ya na ihe niile ahụmahụ ihe ngosi. Gburugburu, textures, bọọlụ golf, na ọkụ emezuru iji mepụta ọmarịcha ahụmịhe egwuregwu. Anyị achọpụtaghị enweghị arụmọrụ ma, yabụ ihe niile bụ dara oke ọnụ iji nwee ọ gamesụ na egwuregwu egwuregwu gị na-egwu ọtụtụ na ntanetị na aka arcade ahụ nke masịrị gị nke ukwuu site na mkpanaka.
Oke Golf bụ egwuregwu nkịtị na egwuregwu nke 4 na 8 egwuregwu nke anyị ga-duel megide ndị ọzọ. Kpachara anya na akụkụ a na-ahụ anya na arụmọrụ ahụ, nke na-eme ka anyị banye ma gbalịa imecha oghere ndị ahụ n'ọtụtụ ọnụọgụ kacha nta. Egwuregwu dị mma maka ụbọchị ndị a ma jee ije n'akụkụ oghere ndị ahụ na ahịhịa nke ọma.
Ezigbo Arcade nke ị nwere ike ihu ndị enyi ma ọ bụ ndị bịara abịa na egwuregwu ngwa ngwa na egwuregwu golf.
Usoro edemede: 6,1
Ezigbo ihe osise
Gwuo ndị ọzọ
Ọtụtụ ọdịnaya na ụdịdị
Developer: Ụgwọ nke ụlọ ọrụ HAEGIN Co., Ltd.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Oke Golf na-akpọrọ gị gaa egwuregwu nke 4 ma ọ bụ 8 egwuregwu nwere ike ị ga-eji mee ihe niile